Tontosa ny zoma 13 novambra 2020 teny amin’ny tokotaniben’ny Hôpitaly HJRA Ampefiloha ny fanolorana ireo fitaovam-pitsaboana sy kojakoja ilain’ny mpiasan’ny fahasalamana hanomezana tolotra ara-pahasalamana mendrika ho an’ny vahoaka. Fiaraha-miasan’ny Governemanta Malagasy amin’ny Governemanta Japoney sy ny UNFPA no nahazoana ireto fitaovana ireto. Faritra miisa 15 manerana an'i Madagasikara no hisitraka izany, dia Alaotra Mangoro, Analamanga, Atsimo Andrefana, Androy, Atsinanana, Betsiboka, Boeny, Sofia, DIANA, SAVA, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany ary Menabe.
Nosokajiana ho isan’ireo faritra mando anatin’ny lisitra Ramsar ny ala honko ao amin’ny helo-dranon’Ambaro, amin’ny morontsiraka avaratra andrefan’i Madagasikara, manamorona ny Canal de Mozambique, eo anelanelan’i Nosy Faly sy Port Saint-Louis. Velaran-tany 54 000 hekitara no misy azy, ary ahitana karazan-javamananaina maro, toy ny zavamaniry sy ny biby izay tsy fahita raha tsy ao an-toerana, ary ny ankamaroany dia ahiana ho lany tamingana. Ny 44 amin’ireo karazam-borona 99 hita ao amin’ny helo-dranon’Ambaro dia azy manokana, ary tsy hita raha tsy ao aminy ihany. Maro amin’izy ireo anefa no ahiana ho lany tamingana toy ny Ankoay, ny Héron de Humblot, ny Fiandry voditatatra, ny Sarcelle de Bernier ary ny vanga de Van Dam. Itoeran’ny varika ihany koa ity helo-drano ity. Isan’izany ny lémur noir, hapalémur gris occidental ary ny microcèbe de Sambirano.Tsy latsa-danja ihany koa ireo karazan-trondro toy ny mâchoiron malagasy, sardinelle à queue noire, ny poisson-verre de Commerson. Tena mampiavaka ity helo-drano ity ny ala honko. Misy karazany roa tena miavaka ao, dia ny Avicennia marina, sy ny Sonneratia alba.
Nankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny diabeta ny teny amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena. Natao ny zoma 13 novambra, raha toa ka ny 14 novambra no ankalazana io andro io isan-taona. Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka no nikarakara ny hetsika izay niarahana tamin'ny AMADIA. Nivoitra nandritra izany ny tokony hampahafantarana izany aretina izany amin’ny vahoaka, satria marobe ny voka-dratsy aterak’io aretina io. Ny tsy fahafantaran’ny ankabeazan’ny olona no manjary mandiso ny fitsaboana. Marihina fa 4% ny tahan’ireo fantatra fa mararin’ny diabeta eto Madagasikara. Na izany aza dia mbola vitsy ireo olona voatily, satria olona 1 amin’ny 10 no nahazoana io taha io. Nanatanteraka fitiliana diabeta faobe ho an’ny Solombavambahoaka sy ny mpiasan’ny Antenimieram-pirenena ihany koa ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, ary fanentanana amin’ny dia
Asa an-terivozona imasom-bahoaka mba ho fananarana. Haseho ny fiarahamonina ireo mpanao herisetra ara-pananahana, na ireo mpanolana, sy ireo mpanao herisetra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (Violences basées sur le genre – VBG). Hafainganina ho isan-kerinandro ny fitsarana ireo raharaha momba ny VBG. Nisongadina ireo omaly nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo teny amin'ny birao fiasany eny Faravohitra.
Sary : LDG
Misedra olana amin’ny rano fisotro ary velon-taraina ny mponina eny Ambatolampy Antehiroka. Lany fotoana andro aman’alina, amin’ny fiandrasana rano ho tonga amin’ny paompy ny olona ka miantso vahaolana fa efa miantraika amin’ny fahasalamana izy ity, ary mampisavorovoro. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 11 novembre 2020 10:56
Taom-pianarana 2020 – 2021 : Nitombo 15- 20% ny isan’ny mpianatra niditra eny anivon’ny sekolim-panjakana
Nitombo 15- 20% ny isan’ny mpianatra niditra eny anivon’ny sekolim-panjakana ho an’ity taom-pianarana 2020 – 2021 ity. Efa misy ny fepetra raisina mifanaraka amin’izany hoy ny Minisitra Sahondrarimalala Marie Michelle, dia ny fametrahana sekoly : 30 EPP, 8 Lisea, 6 CEG Manarapenitra isan-taona, ary koa fanomezana sekoly miisa 2, miaraka amin’ny fampitaovana, isaky ny Distrika manerana an’i Madagasikara isan-taona. Misy Kaominina 1600, sy Fokontany 18 000 eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny EPP no hita eny amin'ny Fokontany, ny CEG no eny amin'ny renivohitry ny Kaominina, ary ny Lisea eny amin'ny Distrika na Kaominina lehibe.
Tonga nanatitra vary sy voamaina teny amin’ny foiben’ny BNGRC Antanimora ny Faritra Analamanga androany, ho anjara biriky amin’ny ady amin’ny kere mianjady amin’ny mponina any atsimon’i Madagasikara. Vary 100 gony sy voamaina toy ny tsaramaso, voanemba, tsiasisa ary voanjombory 40 gony no natolotra tamin'izany. (Jereo Sary Tohiny)
Nanolotra fitaova-kajimirindra mitentina 18 000 dolara (70 000 000ariary) ho an’ny Ministeran’ny rano, fidiovana sy fahadiovana ny fanjakana amerikana, amin'ny alàlan'ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) sy ny tetikasany Rural Access to New Opportunities in Water, Sanitation and Hygiene (RANO WASH). Ahitana solosaina ho an’ny birao sy laptop, finday sy fitaovana haino aman-jery ireo fitaovana natolotra, hampiasain’ny Ministera amin’ny fandrindrana ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19. Hanamafy ny roho-drafi-pitantanana ny antontan-kevitra ao amin'ny Ministera ireto fitaovana ireto, ary koa hanatsara ny fahafaha-misera lavitra, sy hanatsara ny fandrindrana eo amin'ny sehatra nasionaly sy isam-paritany.
Anatin’ny fitsarana ireo taratasim-panadinana izao ny dingana misy ny bakalôrea 2020. Vita ny herinandro lasa iny ny andiany faharoa ho an’ny sokajy teknika, izay nanakatona tanteraka ny adina an-tsoratra. Raha ny fanazavan’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Pr Elia Béatrice Assoumacou izay tompon'andraikitra voalohany amin’ity fanadinam-panjakana hahazoana diplaoma izay lakile hidirana amin’ny anjerimanontolo ity, dia andrasana amin’ny 14 novambra ny voka-panadinana. Misy mangataka hatramin’ny telo andro fanampiny eo ny faritra sasany, hoy izy, noho ny fahataran’ny fahatongavan’ireo taratasim-panadinana.
Mikorontana ny tsena na Bazar be Antsohihy, renivohitry ny faritra Sofia. Toa jerem-potsiny, ary tsy misy sahy mandray andraikitra raha ny fahitana azy. Re fa efa niezaka nandamina ihany ny fiadidiana ny tanànan'Antsohihy fa tsy tontosa izany noho ny sakana nataona depiote iray ny volana Jolay 2020 teo. Vokany, mikorontana ny tsena, tsisy mpandamina. Eny afovoan-dalana ny mivarotra anana. Ahiana ny mety hisian’ny loza amin'ity toerana ity raha mitohy, na koa tsy misy fandraisana andraikitra.Iza ary no andrasana handamina, sa rehefa misy manakana dia tsy misy sahy mijoro mandray andraikitra intsony ? (Jereo Sary Tohiny)